Madaxweyne Xassan sheikh oo ku baaqay in shirka Jubbaland iyo federaalka lagu dhameeyo dalka – Radio Daljir
Madaxweyne Xassan sheikh oo ku baaqay in shirka Jubbaland iyo federaalka lagu dhameeyo dalka
Agoosto 21, 2013 2:28 b 0
Adis-Ababa, August 21, 2013 – Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa casho sharaf u sameeyey, wefdigii dowladda federaalka iyo kuwii Jubbaland ee wada-hadalku uga socday magaalada Adis-Ababa ee xaruunta dalka Ethopia.
Kulanka ka dhacay xalayto Adis-Ababa ee dalka Ethopia ayaa waxaa intiisa badan uu ahaa mid ku kooban wada-hadalo aan toos ahayn iyo kala xog qaadasho, waxaana hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud wuxuu inta badan hadalkiisa diirada ku saaray xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka ka hana-qaadi kara magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada hoose.
Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in wada-hadallada Adis-Ababa la isku fahmo oo inta badan lagu gorfeeyo sidii loo heli lahaa jidad loo maro wada-hallada iyo xalinta siyaasada is diidan ee Jubbaland, wuxuu ku baaqay in shirka muhiimadiisa lagu dhameeyo gudaha Soomaaliya.
Qunsulka safaarada Soomaalida ee dalka Ethopia Faarax Cali Axmed ayaa war-baahinta u xaqiijiyey kulanka xalayto ee Adis-Ababa, balse ma jiraan warar dheeraad ah oo kulankaasi la xiriira oo ka soo baxay natiijada rasmiga ah ee kulanka casho sharafta ah ee labbada dhinac.
Adis-Ababa Ethopia waxaa ka socday toddobaadyadii tegey kulamo u dhexeeya dowladda iyo Jubbaland oo lagu gorfeynayo amuuraha gobollada Jubooyinka iyo Gedo,? Madaxweynaha federaalka iyo kan Jubbaland ayaa iyana ku biiray wada-hadalka in kastoo aan la shaacin ilaa hadda natiijo rasmi ah.
Baarlamanka federaalka oo sheegay in ay meel-mariyeen howlo muhiim u ah dalka sanad kadib
Maamulka shabeelaha dhexe oo dalbaday in ciidamo boolis iyo nabad-sugid ah la keeno gobolkaas